China Ibu igwe na-ebutu robot HY1020A-200 Manufacturer and Supplier | Yunhua
HY1020A-168 bụ a 6 axis robot tumadi etinyere na loading na ebutu. Ọ bụ igwe eji arụ ọrụ nke njikwa usoro ọnụọgụ na-achịkwa. Site n'enyemaka nke mmekọrịta mmadụ na kọmputa, nke na-achịkwa njikwa nke nkwonkwo ọ bụla na akụkụ ya ma zipụ iwu ahụ na igwe dị ala, HY1020A-168 robot ga-emezigharị usoro nke akpaka na ibudata. O nwere ike dochie ntuziaka loading na ebutu arụmọrụ na-etolite oru oma akpaka loading na ebutu usoro.
Dị ka igwe na-arụ ọrụ nke ọma, HY1020A-168 nwere omume ọma nke arụ ọrụ kwụsiri ike, nke a pụrụ ịdabere na ya na nke na-aga n'ihu, nhazi ọkwa dị elu, njikwa ngwa ngwa na ịmịkọta, na-ebelata oge ọrụ. Ọ nwere ike melite otu ngwaahịa n'ichepụta nkenke, mee ngwangwa maka imepụta ihe ọfụma na ngwa ngwa ma na-agbanwe agbanwe iji gbanwee maka ọrụ ọhụụ na ngwaahịa ọhụụ, belata nnyefe
6 20KG ± 0.08mm 8.0KVA 0-45 ℃ 20-80% RH (enweghị ntu oyi) 330KG N'ala, iweli elu IP54 / IP65 (úkwù)
Akụkụ ihe ± 170 Celsius + 80 Celsius ~ -150 Celsius + 95 Celsius ~ -72 Celsius ± 170 Celsius ± 120 Celsius ± 360 Celsius
Maxi ọsọ 150 Celsius / s 140 Celsius / s 140 Celsius / s 173 Celsius / s 172 Celsius / s 332 Celsius / s
Q1. Gịnị ka robot a jiri?
A.Robotic Na-adọnye na ibudata ihe maka ngwaọrụ igwe. Mmepụta akara loading na ebutu a workpiece tụgharịa, gbanwee ọrụ iji na ihe ndị yiri ya.
Q2. Gini banyere ịrụ ọrụ na ibutu arụmọrụ robot?
A.Uji egbe na ibudata robot nwere ike ime ka ihe oru oma karie, robotic na-emeputa igwe site na 20% karịa usoro omenala.
Q3.Can na-ebugote ma na-ebutu robot ịhazi na ihe mmetụta ọhụụ?
A.Vision nwere ike iji chọta akụkụ na belt ebu ma ọ bụ na pallet. Nke a dabere na ịmara YOO OKWU robot ọtụtụ ihe ọma.
Q4. Ego ole ka ị na-ebu maka ibudata na ibudata robot?
A. Na-adọkpụ na ibudata robot, họta ma tinye robot kwa, YOO HEART robot si 3Kg ruo 165kg nwere ike iji rụọ ọrụ a. 10kg na 20kg na-ejikarị.
Q5.Why kwesịrị m iji loading na ebutu robot maka m CNC igwe?
A.Ihe a na-arụ ọrụ na igwe na-arụ ọrụ na robotik nwere ike melite arụmọrụ arụmọrụ. Ngwunye nri igwe ga-eme ka arụpụta ihe na ndị ọrụ nwere nkà n'efu maka ọrụ na-akpali akpali ma na-amị mkpụrụ.
Nke gara aga: Ihe osise robot HY1010A-143
Osote: Abụọ Axis Rotator